Company Profile - Shenzhen Bowei Tech Co., Ltd.
808 Diode Laser Bvudzi Kubvisa
Detox Tsoka Spa
Ganda Yekuongorora Machine
Ultrasonic Ganda Kukwesha
Shenzhen Bowei Tech Co., Ltd. ari runako & utano midziyo nokutengesa muna China, iyo rinobatanidza kutsvakurudzwa & kusimukira, kugadzira, kutengeserana, aftersale basa pamwe chete. Kubva pakagadzwa vekwedu, vose kushanda yedu yave vafanane ISO9001 unhu hurongwa mureza.
Hatina atoiswa yakakwana unhu vimbiso maitiro uye akavaka yakakwana rokutengesa uye afterales basa samambure pamusika vemo. Kuti tocater nokuda kumusika kukura uye vatengi 'zvinodiwa, isu usamborega kuedza kupa zvigadzirwa nani uye pashure-okutengesa basa.
"Kupa yepamusoro kugadzirwa uye mukuru webasa" ndiyo Unhu yedu chisarudzo. "Kugutsikana of nemakasitoma ndiyo mwero basa" ndizvo marketingstrategy yedu. Mweya kutevera yokuisvonaka uye zvakanakisisa basa anoita zvinhu zvedu nevakawanda kwete chete muna China, asiwo kuSoutheast Asia, kuti Mid-East, Europe, Australia uye North America, pakuva mukuru mukurumbira pakati vatengi dzedu kubva munyika yose
IPL Ganda Treatment , michini EMS Machine , Light Shr IPL Hair Removal Machine , Skin Tightening Radio Wave Frequency Machine , Home Use Cold chiso Steamer , Aromatherapy pachiso Steamer ,